Ona iwe uri 2017 Chinaplas muna Guangzhou - China Kingswel Machinery
Kingswel akagadzirira kutora chikamu mune 31th Chinaplas 2017 mu Guangzhou.The wakanaka kubva rechi16 kusvikira wa19 May. nhamba yedu Dumba ndiye S01, Hall 11.1.
Tinokutendai mose kutsigirwa uye kutarisirwa kuti Kingswel uye hatigoni kumirira kuona iwe musi Chinaplas.
Post nguva: Apr-26-2017
Kingswel akagadzirira kutora chikamu mune 201 ...
Kingswel ari kutora chikamu mune 2015 Chinaplas muna Guangzhou. The pashoo nguva anobva May 20 kusvikira May 23. nhamba yedu dumba ndiyo 11.1 S65. Tariro kuona kwedu vatengi akwegura uye itsva ikoko!